20.03 Tsy miala amin'ny Tompo na inona mitranga
Anio Talata 20 Marsa 2018 dia ny Apokalypsy 2.12-17, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy ? na ny Fanahy Masina sy ny hoe inona no fampitandremana hita ao ?
12 Ary soraty ho amin’ ny anjelin’ ny fiangonana any Pergamosy : Izao no lazain’ ilay manana ny sabatra roa lela maranitra :
13 Fantatro izay onenanao, dia ao amin’ ny itoeran’ ny seza fiandrianan’ i Satana; ary mitàna mafy ny anarako hianao ka tsy nandà ny finoana Ahy, na dia tamin’ ny andron’ i Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky Ahy, dia ilay novonoina teo aminareo, teo amin’ izay onenan’ i Satana.
14 Kanefa manan-teny kely aminao Aho, fa misy eo aminao izay mitàna ny fampianaran’ i Balama, ilay nanome fò an’ i Balaka hanisy fahatafintohinana teo anoloan’ ny Zanak’ isiraely, hihinana hena naterina tamin’ ny sampy sy hijangajanga.
15 Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran’ ny Nikolaita tahaka ny an’ ireny.
16 Koa dia mibebaha; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao faingana Aho ka hamely ireo amin’ ny sabatry ny vavako.
17 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ ny Fanahy amin’ ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin’ ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra, izay tsy fantatr’ olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
TSY MIALA AMIN’NY TOMPO NA INONA MITRANGA
Na dia niaina tao anaty tontolo nanjakazakan’ny asan’ny aizina aza ny Fiangonana tany Pergamosy dia nisy ireo olona izay nijoro hatrany tamin’ny fihazonana ny finoana an’i Kristy, eny fa na dia niafara hatramin’ny fahafatesana mihitsy aza izany.
Fandoto iray tandroka.
Fa na dia tao aza ny fisian’ny olona nanana finoana an’i Kristy matanjaka, dia nisy koa ireo izay mbola nampifangaro ny fivavahana tamin’ny fanompoan-tsampy sy ny fijangajangana (fampiana-ran'i Balama ).
Nisy koa ireo izay nilaza fa ny fahafahana tao amin’i Jesoa Kristy dia mahasarona izany fijangajangana izany ary tsy manohintohina velively ny famonjena (fampianaran’ny Nikolaita). Koa nantsoin’ny Tompo ireo olona ao amin’izany fiangonana izany hibebaka.
Safidy roa :
Fandringanana ho an’ny mpanota tsy mety hibebaka.
Ireo izay manara-dia an’i Kristy kosa dia hahazo ny valim-pitiany sy fiovana manokana haharitra mandrakizay avy amin’Izy Tompo mivantana.
Tandremo fa mety ho fandrika ampiasain’i Satana
hanodinana ny tena fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra
ny fibosesehan’ny fampianaram-pivavahana etsy sy eroa.